ရွှေဆိုင်းသည် အနားယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည့် မြန်မာလက်ဝှေ့အားကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ကာ အလွတ်တန်းလက်ဝှေ့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
၈၀ kg (၁၇၆ lb)
Sai Maung Maung (son)
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ရွှေဆိုင်းနှင့် အသင်းသား အေးဘိုစိန်၊ နိုင်ဝမ်းလေးနှင့် ဝင်းထွန်းတို့သည် ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံအားကစားရုံ၌ ကျင်းပသည့် လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ ဗမာလက်ဝှေ့သမားများသည် ဂျပန်အားကစားသမားများဖြစ်ကြသည် တမူရ၊ ယိုရှိတရို နိအိမိ၊ တခဟရုယာမမိုတိုနှင့် ဆေးဂျိဝခဆုဂိတို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ခဲ့သည်။ The Burmese fighters were matched against four Japanese fighters: Tamura, Yoshitaro Niimi, Takaharu Yamamoto and Seiji Wakasugi.
ထိုကာလတွင် ရွှေဆိုင်းသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ် ရွှေခါးပတ်ချန်ပီယံ ဇော်ဝင်းထွန်းကို ပင့်လက်သီးဖြင့် ထိုးကာ အနိုင်ယူခဲ့သည်။ အခြားပွဲတွင်မှာမူ သရေကျခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုလတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ရွှေဆိုင်း၏ သားဖြစ်သူ စိုင်းမောင်မောင်သည် စောဝင်းထွန်း၏ သားဖြစ်သူနှင့် WLC 9: King of Nine Limbs ပြိုင်ပွဲ၌ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ရန် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဆေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းပြချက်များဖြင့် ထိုပွဲသည် ပျက်ပြယ်သွားခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ရွှေဆိုင်းသည် ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ၌ ရှုံးနိမ့်ကာ အလွန်တန်းကမ္ဘာ့လက်ဝှေ့ဆုကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသည်။ ယခင်က အလွတ်တန်းချန်ပီယံဟောင်းဖြစ်ခဲ့သူ ရွှေဝါထွန်းကို စိန်ခေါ်သူ လုံးခေါ်က ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ လုံးချောသည် ထိုပွဲတွင် အနိုင်ရကာ အလွတ်တန်းချန်ပီယံအသစ် ဖြစ်လာခဲ့သည။ ရွှေဆိုင်းနှင့် လုံးချောတို့သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပြီး လုံးချောသည် ထိုပွဲကို KO ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သည်။
0 fights,0wins (0 (KO/TKO's),0losses,0draws
2019-11-25 Draw Saw Nga Man Myanmar vs. Thailand Challenge Fights, Myaing Gyi Ngu Hpa-an, Myanmar Draw23:00
2011 Draw Yan Gyi Aung Challenge Fight  Myanmar Draw53:00
2011 Draw Phoe Kay Challenge Fight  Myanmar Draw53:00
2009-04-05 Loss Lone Chaw Dagon Shwe Aung Lan Final Yangon, Myanmar KO50:18
Special5round challenge fight, outside of Aung Lan bracket
2009-02-28 Loss Yan Gyi Aung Dagon Shwe Aung Lan Semi-final Yangon, Myanmar Decision 5
2008-04-27 Draw Yan Gyi Aung Challenge Fights, Aung San National Indoor Stadium Yangon, Myanmar Draw53:00
2005-10-16 Draw Lone Chaw 2nd City F.M Aung Lan Tournament, M.C.C. Yangon, Myanmar Draw53:00
2004-07-11 Draw Yoshitaro Niimi Myanmar vs. Japan Challenge Fights Yangon, Myanmar Draw53:00
2004-06-13 Win Wan Chai Challenge Fights, Thuwunna Gymnasium Yangon, Myanmar TKO32:52
2004 Win Shan Lay Thway Challenge Fight 2004 Yangon, Myanmar
Wins Openweight Lethwei Golden Belt
Mark Schroeder။ Reviewing the 64th Karen State Day Lethwei Event။ The Fight Site။
SONS OF LETHWEI LEGENDS TO MEET IN THE RING AT WLC: KING OF NINE။ Asia Persuasian MMA (22 June 2019)။
"Akitoshi Tamura (Japan) and Aye Bo Sein (Myanmar) in action in 67 kg division"၊ The New Light of Myanmar၊ 11 July 2004။
"မြန်မာ-ဂျပန် မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲအကြို ရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ"၊ The Mirror Daily၊ 10 July 2004။
"နိုငံတကာမြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲကျင်းပ၊ နိုင်းဝမ်းလေးက ယာမာမိုတိုကို အလဲထိုးဖြင့်နိုင်"၊ The Mirror Daily၊ 11 July 2004။
Gerald Ng (23 June 2019)။ WLC KING OF NINE LIMBS: FIGHTING FAMILIES။ Fight Mag။